Apple ayaa la filayaa inay hogaamiso iibinta 5G casriga ah 2020 | Wararka IPhone
Dad badan ayaa filayay in iPhone 11-ka cusub uu durba la jaan qaadayo shabakadda 5G ee mustaqbalka, iyadoo la tixgelinayo in shirkadaha kale ay horeyba u leeyihiin teknoolojiyad tiknoolajiyaddan ah. Way cadahay inay noqon doonto shabakada gudbinta xogta ee calaamadeyn doonta kahor iyo kadib xawaaraha jawaabta internetka ee aaladaha moobaylka.
Laakiin kaabayaal cusub oo qaali ah ayaa looga baahan yahay anteenada iyo heerka server-yada shirkadaha telefoonnada. In kasta oo ay run tahay in shabakadda 5G ay durba run tahay, runta ayaa ah in xilligan ay ka shaqeyso oo keliya meelaha qaarkood bartamaha caasimadaha waaweyn, iyo heerka imtixaanka. Apple waxay aaminsan tahay inaadan ordi doonin oo markay 5G ku dareyso boosteejooyinkeeda, horeyba waa loo xaqiijiyay, xasilloon oo lagu kalsoon yahay. Tartiib tartiib iigu labis, waan degdegay ...
A warbixinta ee shirkadda falanqeeyaha ee Istaraatiijiyadda Falanqaynta meesha uu taas ku sharxayo Apple ayaa la filayaa inay qabato saamiga ugu badan ee suuqa 5G ee soo baxaya sanadka 2020, ka dib markii la soo saaray iPhone-ka soo socda horeyba ula jaanqaaday shabakaddan cusub.
Shirkadani waxay rumaysan tahay in Apple ay si fudud ugu baahan tahay inay isbarbar dhigto heerka ay hadda marayso ee cusboonaysiinta si ay u maamusho suuqa gunta 5G wixii ka dambeeya Sebtember 2020, markaasoo la filayo in la soo saaro iPhone 5G.
Ken Hyers, Agaasimaha Falanqaynta Istaraatiijiyada, ayaa tilmaamaya in inkasta oo Samsung iyo Huawei ay horay u haysteen 5G terminaal suuqa, Apple ay ku dhaafi karto iyaga saddexda iPhone ee soo socda ee 2020. Wuxuu aaminsan yahay in Apple iyo Huawei ay kala qaybin doonaan labada suuq ee 5G ee ugu weyn sanadka 2020: USA iyo Shiinaha. Waxa kale oo uu aaminsan yahay in mustaqbalka fog, Samsung ay xukumi doonto suuqa taleefannada 5G sababo la xiriira suuqgeynta caalamiga ah iyo istiraatiijiyadda qiimeynta, laakiin hadda, muddada dhow, Apple wuxuu noqon doonaa hoggaamiyaha Mareykanka, oo ay doorbidayaan xannibaadda arrintan. suuqa Huawei, taas oo noqon doonta tan ugu weyn suuqa Aasiya.
Kuo waxay u qaadataa 5G in lagu siiyay iPhones-ka soo socda
Ming-Chi Kuo horay ayuu u dhacay in saddexda iPhone ee soo socda ee 2020 ayaa la jaan qaadi doona 5G. Filo cabirka 5.4 iyo 6.7-inch inuu noqdo mid heer sare ah, sida midka hadda jira ee iPhone 11 Pro, halka midka 6.1-inji uu noqon doono qiimo ka hooseeya, sida kan hadda jira ee iPhone 11.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Apple ayaa la filayaa inay hogaamiso iibinta 5G casriga ah sanadka 2020